Toeram-pisakafoanana tsara indrindra any Times Square | Vaovao momba ny dia
Mandehandeha any New York ve ianao sa nofinofisinao ary handeha ho tonga saina amin'izany? Tsara! New York no tanàna cosmopolitan tsara indrindra eran'izao tontolo izao ary na dia misy fifaninanana any Azia aza dia heveriko fa any Andrefana dia ny tsara indrindra.
Tsara ny fiainana any New York ary be ny bara, teatra, sinema, toeram-pivarotana ary trano fisakafoanana isan-karazany, noho izany dia tsy mila matory aloha loatra ianao eto. Ny fihinana dia fahafinaretana lehibe na aiza na aiza alehanao, noho izany tanisao ny sasany amin'ireo trano fisakafoanana tsara indrindra ao amin'ny Times Square.
3 Zaridaina oliva
5 Sakafo fisakafoanana an'i Ellen's Stardust
Zoron'i New York io fihaonan-dàlana marobe any Midtown Manhattan: ny teboka fihaonan'ny Seventh Avenue amin'ny Broadway Avenue. Ity faritra kely any New York ity dia misy sakana vitsivitsy ary io dia an-tongotra izay tsy azon'ny olona atao.
Times Square nantsoina toy izao hatramin'ny 1904, taloha dia nantsoina hoe Kianja Longacre, fa ny gazety malaza The New York Times tamin'io taona io dia nifindra tao amin'ny trano vaovao izy, ny Times Building. Zavatra iray no mitarika mankany amin'ny iray hafa, ary ankehitriny dia antsoina hoe Times Square izy io.
Soraty izay hisakafoanana eto:
Izy io dia iray amin'ireo trano fisakafoanana ao an-tanàna manana endrika tsara indrindra, kanto sy manintona. Ny bar dia tranokala miavaka miaraka amin'ny banquette Augustine mena-mena ary koa misy amam-patana vatosokay nanomboka tamin'ny taona 20.
Miandraikitra ny lakozian'ity Trano fisakafoanana kantodeco misy ny chef Geoffrey Zakarian ary manana ny menio lovia voadio toy ny foie gras, zanak'ondry vita amin'ny rongony, profiteroles dibera pecan ary cocktails tsara, miaraka amin'ny jazz mivantana ianao na mandeha alarobia alina na alahady antoandro antoandro.
Mazava ho azy, io no iray amin'ny lafo indrindra. Azonao jerena ao amin'ny 132 West 44th, St.
Raha mitady ianao misakafo amin'ny fahitana tsara ny tanàna amin'ny haavon'ny arabe, avy eo toerana tsara ity. Raha ny marina dia rojom-pisakafoanana avy any sakafo italianina, Kinova Yankee. Ao amin'ny Times Square dia misy sampana misy rihana telo voaravaka amin'ny fomba Tuscan.
Ambany ny vidiny, lehibe ny ampahany Ary tsy misy ilana azy ny mofo sy salady ka mahafinaritra ho an'ireo mpizahatany noana.
Manaiky carte de crédit ary misokatra manomboka ny Alahady ka hatramin'ny Alakamisy manomboka amin'ny 11 maraina ka hatramin'ny 11 alina ary ny zoma ka hatramin'ny sabotsy manomboka amin'ny 11 maraina ka hatramin'ny misasakalina. Afaka mihinana eo ianao na mividy maka ary avy amin'ny tranonkala dia afaka manao famandrihana. Raha mandeha amin'ny faran'ny herinandro ianao dia tokony hanao izany.
Raha manandrana manolotra sakafo italianina eto i Olive Garden dia manana isika Sakafo Corean. BonChon dia rojo miaraka amina trano fisakafoanana zato manerana an'izao tontolo izao.
BonChon no toerana hihinana elatra akoho masiaka, tongolo soja, kimchi, sy ny zavatra hafa rehetra toa azy, fa ny mampiavaka ny trano dia akoho marina: elatra, ranjo, fe ary ny combo, hanandrana ny zava-drehetra.
Vidiny? Ohatra, ny ampahany kely amin'ny elatra (singa 10) dia mitentina 11 $ fa ny combo (elatra enina sy fe 95) dia mitentina 3 $. Avy eo dia misy lovia be pitsiny kokoa, tteokbokki amin'ny vidin'ny 12, takoyaki 95 dolara, hena nendasina 11 dolara, lasopy udon ho an'ny 95 na lovia iray nendasina 7 dolara.
Mahita an'i BonChon ianao amin'ny 207 W 38th St. Manokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny alarobia manomboka amin'ny 11:30 maraina ka hatramin'ny 10:30 alina, ny alakamisy mihidy amin'ny 11 ora alina, ny zoma amin'ny 12 ora, sabotsy amin'ny 11 alina indray ary ny alahady amin'ny 10:30 alina.
Sakafo fisakafoanana an'i Ellen's Stardust
Tsy afaka miala any New York ianao raha tsy mandalo a kilasika Fisakafoanana hariva koa eto isika dia manana iray. A Trano fisakafoanana misy lohahevitra 50 miaraka amin'ny tsara menu New York: sandwich, hamburger, pastrami, voasarimakirana.
Fa ankoatry ny sakafo ny mpiandry no jerena satria manao seho izy ireo mandritra ny fotoana anafarany ny baiko ary mahazatra be ireo hira, tsy azo atao ny tsy hahafantaranao mihoatra ny iray satria feon-kira rock sy sarimihetsika malaza no henoin'izy ireo.
Mihira an-tsehatra izy ireo, miainga ary manohy mizara lovia. Raha zavatra hafa no tadiavinao ary misakafo ary mifalifaly kely miaraka amin'izay ity no tranonkala. Azo antoka fa tsy ny sakafo tsara indrindra fa ho junk sakafo unpretentious tsy ratsy loatra.
sakafo mexiacana miaraka amin'ny taco maro eo imasony ary ny sasany amin'ireo tsara indrindra ao an-tanàna. Quesadillas sy margaritas dia manampy amin'ny lisitra amin'ity bistro Meksikana ity izay misy latabatra lamban-databatra fotsy, tile Espaniola eo amin'ny rindrina, ary efitrano fandraisam-bahiny misy rihana roa.
Izy io dia manana tranokala super feno izay hamoahan'izy ireo ny menio araka ny andro amin'ny herinandro mba hahafahanao mitsidika azy alohan'ny handehananao. Misokatra hisakafoanana antoandro sy sakafo hariva ary odiambavafo amin'ny faran'ny herinandro dia manomboka amin'ny 11:30 maraina ary mifarana amin'ny 3:30 hariva.
Ary raha tena tianao ny zavatra iray dia afaka mijanona eo am-pivarotana ianao alohan'ny handehananao mividy karazana saosy isan-karazany sy sakay voatsangana, eo anelanelan'ny 5 sy 35 dolara.
Efa niresaka momba ny sakafo italianina, koreanina, meksikana ary amerikanina mahazatra izahay saingy tsy ampy intsony ny zavatra tsy azontsika ka anjaran'ity sakafo chinese. Toerana mahaliana hanandrana azy io dia i Hakkasan, sampan'ny trano fisakafoanana any London izay misy olona enina manerantany.
Kantonianina ny nahandro ary io ilay trano fisakafoanana sinoa voalohany manana ny satan'i Michelin. mazava, Tsy mora izany fa hohaninao miaraka amin'ny saosy champagne sy tantely sinoa, ohatra, ny kaody nandrahoina tsara indrindra, ohatra. Ary mazava ho kanto ny ravaka.
Toerana lafo vidy izy io ary mahavita ampahany kely. Raha mbola mandeha ianao, ary afaka mankafy sakafo atoandro dia aza hadino ny mangataka ireo pahina vola satria io no antony tsara indrindra hahalalana ity trano fisakafoanana ity. Amin'ny 311 West 43rd Street io.
Avy amin'ny zavatra lafo be isika ka mankany amin'ny zavatra mora vidy. Ao amin'ilay antsoina hoe Theatre District no misy an'ity tranonkala ity izay manompo burger goavambe misy fries marobe ary fa kosa burger portobello misy fromazy sy tongolo, ho an'ny vegetarian. Ny labiera, divay ary zava-pisotro malefaka feno a Menio tsotra, mora ary be dia be.
Natomboka tamin'ny sarety alika mafana tao Madison Square Park izany rehetra izany, tamin'ny 2004, fa ao amin'ny Times Square dia trano fisakafoanana misy eo amin'ny 691 8th Avenue, eo amin'ny zoro atsimo andrefan'ny arabe sy ny arabe faha-44.
Manompoa burger, divay, labiera ary alika mafana foana ary misokatra fito andro isan-kerinandro manomboka amin'ny 11 maraina ka hatramin'ny misasakalina.
ny pizza any nyc? Angamba kilalao toy ny alika mafana eo an-jorony na mihinana hamburger amin'ny fisakafoanana iray izy io. Eto ianao dia afaka manandrana azy ao amin'ny Don Antonio, amin'ny fomba neapolitan.
Hay karazana pizza maro Ary voalaza fa ny mozzarella sy burrata an-trano hataon'izy ireo eto, homemade, no sasany amin'ny tsara indrindra any New York. Azonao atao koa ny mihinana salady, croquette ary mazava ho azy, paty.
Ny sasany amin'ireo trano fisakafoanana tsara indrindra any Times Square hatreto, saingy mazava ho azy tsy izy ireo ihany. Satria afaka mihinana sakafo eran'izao tontolo izao ianao, ny marina dia tsy misy farany ny lisitra noho ny safidy tsirairay (pizza, pasta, sushi, mexico, espaniola, rosiana ary snsetera lava), misy ohatra maromaro.
Miankina amin'ny hoe te hipetraka amin'ny trano fisakafoanana ve ianao na te-hihinana eny an-dalana, amin'ny iray amin'ireo sarety marobe eto amin'ity faritra New York ity ary mamadika sakafo ho lasa fizahantany mpizahatany ihany koa, raha mitady trano fisakafoanana ianao dia mieritreritra aho fa anisan'ireny notanisiko ireny no be mpitia indrindra. Aza adino izy ireo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » gastronomy » Toeram-pisakafoanana tsara indrindra ao amin'ny Times Square
Nara dia hoy izy:
Salama maraina, ho eto an-tanàna aho handany ny Taom-baovao ary te hisakafo hariva any amin'ny trano fisakafoanana ahafahako mahita ny filatsahan'ny baolina amin'ny 00:00 amin'ny 1/1/2013. Hakatona ny Planet Hollywod. Inona no amporisihinao? Misaotra!
Valiny tamin'i Nara
Zavatra hatao any Belfast